कोरोनाको बेला चार सय जनाको बैठक !
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरजिम्मेवार मान्छे अन्त खोज्नै नपर्ने बताएका छन् । ओलीले कोरोना महामारीको समयमा पनि गैरजिम्मेवारी तरिकाले पार्टीका नेताहरु प्रस्तुत भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
बालुवाटारमा आज मंगलबार विज्ञलगायत राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग भएको छलफलमा ओलीले नेकपाका नेताले नै कोरोना भाइरसको महामारीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफ्नै पार्टीका नेता यस्तो महामारीको समयमा पनि मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार नभई स्वार्थको पछाडि लागेको बताए ।
लामो समयदेखि सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नदिने भनेको छ । तर, पार्टीका नेताहरु भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँडिरहेका छन् ।
उनले भने, ‘केही मानिस र केही संस्थाहरु गैरजिम्मेवार देखिए । यसको उदाहरण हो, मेरै पार्टी । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नदिने भनेको छ । तर, मेरो पार्टीका नेताहरु ४ सयभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन् । कहाँ बस्ने, के गर्ने ?’
उनले थपे, ‘स्थायी कमिटीको बैठक चाहियो कि चाहियो भन्नेबाहेक केही छैन । देश र जनताप्रति बेवास्ता गर्ने र स्वार्थका लागि मात्र कुद्ने प्रवृत्ति निकै देखिएको छ ।’
ओलीले मिडियाको व्यवहारको पनि कडा आलोचना गरेका छन् । उनले भने, ‘केही सञ्चारमाध्यमले सरकारका जुनसुकै काम र कदमको विरोध गरेका छन् । क्वारेन्टिन राखे, किन राख्यो ? नराखे, किन राखेन ? लकडाउन गरे, किन ग¥यो ? नगरे, किन गरेन ? यसरी मान्छे उचाल्ने र भड्काउने काम मात्र हुन थाल्यो ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २०, २०७७ २२:२७